2017 May 19 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
XOG RASMI AH: Shaqaalaha UN-ka oo loo diiday inay ka cunteeyaan Maqaayad Soomaali ku taal Xalane
Qaramada Midoobey ayaa uga digtay shaqaalaheeda in aanay isticmaalin ama ka cunteyn maqaayada The Village ee ku taala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Fariin loo kala diray shaqaalaha ayaa looga digay illaa amar dambe in aysan maqaayadaas ka cunteyn karin, isla markaana aysan tagi karin xilliyada nasashada iyo fasaxa shaqada ku jiraan. Xog […]
GAROOWE(P-TIMES)- Si adag ayey wali u socotaa Dabeysha ka dhalatay codsigii Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Max’ed Ali Gaas u diray guddoonka baarlamaanka ee ahaaa in la kordhiyo tiradda Xildhibaanada golaha Wakiilada ee Puntland oo la furo si loo helo wax Cadaalad u e`eg, taas oo la kulantay soo dhaweyn iyo mucaaradid labadaba. Guddoonka baarlamanka […]
Waxa ay ku buuxdaa 100 maalmood doorashadii Madaxweyne Farmaajo. Maalmo ka hor ayaa Nairobi looga dhawaaqay Madal la baxday ”Horu­socod” oo baraha bulshada iyo warbaahinta Somalida aad looga dooday loona kala qeybsamay ilaa 3 aragti: 11- In ay khalad tahay dhalashada Madashan, lagana hor­tago, lana joojiyo, kuna tilmaameen; khiyaano qaran, Saadicuun bil­xukuuma, Xildhibaano xil ama […]
XOG MUHIIM AH: Maxaa dhexmaray M/weyne Farmaajo & Madasha HORU-SOCOD, Kulan dhexmaray xalay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la kulmay Mudanayaal kamid ah baarlamaanka Faderaalka, gaar ahaaa madasha Horusocod oo dhawaan soo gaartay magaaladaas, oo ay kaga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankan si gaar ah ula qaatay Xildhibaanadan golaha Shacabka oo ay kala hadleen arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo […]
DAAWASHO XASAASI AH: RW Kheyre oo si adag iskaga difaacay Xildhibaanada ka soo horjeeda, shaacana ka qaaday
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa difaacay waxqabadka Xukuumaddiisa cusub, xilli Xildhibaanno ka tirsan Barlamanka Federaalka Somalia ay dalka dibadiisa kasoo mucaaradeen. Isagoo ka hadlay Xaflad lagu soo dhaweynayay Duqa Muqdishu Thaabit Cabdi Maxamed, ayuu Ra’iisal Wasaaraha Kheyre sheegay in dowladdiisa ay qabatay wax badan mudadii 3 bilood ee xafiiska joogtay. Amniga Ra’iisal wasaaraha waxqabadka uu ku faanay […]
GAALKACYO(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xalay ay maleeshiyaad ka soo jeeda Koonfurta magaalada Gaalkacyo ku qaadeen deegaanka Bali-Busle ee barriga magaaladaas, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey dhimashada labo qof oo ahaa shacabka magaalada. Sidaas oo kale dhaawaca 2 qof oo kale oo mid kamid ah sahlan yahay ayaa la xaqiijiyey in […]
DHAB KA HADAL: Hawada Soomaaliya iyo asbaabaha loo wareejin la’yahay?
Tan iyo sanadka markuu ahaa 2002 waxaa socdey warmurtiyeedyo kala duwan oo ka hadlaya in Soomaaliya ay la soo wareegi doonto maamulka hawada dalka. Waliba waxaa lixdii sano ee ugu dambeeyey sii xoogeystey wararka sheegaya in Soomaaliya ay la soo wareegtey hawada Soomaaliya. Wararka noocaan ah oo ay qoreen warbaahinta Soomaaliya waana mid ay inta […]
WAR DEG DEG AH: Weerar dhimasho iyo dhaawac sababay oo ay Galmudug ku qaaday Deegaanka Bali-Busle ee Puntland
GAALKACYO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa xaqiijinaya in ay maleeshiyaad ka soo jeeda Galmudug, weerar dhimasho iyo dhaawac sababay ku qaadeen deegaanka BaliBusle ee degmada Jariiban, saqdii dhexe ee xalay, isla markaasna ay gudaha u galeen magaalada. Inta la xaqiijiyey ilaa hadda 2 qof ayaa geeriyootay, sidaas oo kalena labo qof oo kale […]